KN95 ọkara akpaka nkpuchi igwe mmepụta akara
A na-etinye etiti ikuku ikuku na ụgbọ okporo ígwè dị ala, ụgbọ ala dị ala, ụgbọ oloko dị elu, ụgbọ oloko na tram.
Ike ikike -200pcs / afọ, pụrụ iche maka ndị ahịa, imepụta ma nyere aka ịzụlite maka ndị ahịa, anyị nyere maka Merak-Jin xin Air-Conditioning Systems (Wuxi) Co., Ltd;
Uru nke ngwaahịa: Ibu ọkụ, obere oghere, usoro dị mfe ma nwee ezi uche, ogologo ndụ ọrụ, ọ dịkarịa ala afọ 30
KN95 wuru na-imi akwa waya ịse igwe, kpụrụ na bee iche iche, 100 iberibe kwa nkeji.
A na-etinye kabinet traction (DFBK) na ụgbọ okporo ígwè dị ala, ụgbọ ala dị ala, ụgbọ oloko dị elu, ụgbọ oloko na tram. Ike -500pcs / afọ, pụrụ iche maka ndị ahịa. Anyị wetara Fuji, eze, skoda (dị na China).
Straddle monorail bogie, gụnyere mmepe, ntinye na mmepụta. Etinyere ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ ala dị ala, ụgbọ oloko dị elu, ụgbọ oloko na tram, ikike -100pcs / afọ, pụrụ iche maka ndị ahịa. Anyị wetara maka China Railway Group Limited, China Sky Railway Group.
Equipments: nnukwu ịgbado ọkụ okpokoro okpokoro, High nkenke 5-kwadoro gantry machining center; ya na ulo oru ejikere nke oma, ndi okacha amara ya na otutu ndi oru.
Etinyere ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ ala dị ala, ụgbọ oloko dị elu, ụgbọ oloko na tram, ikike nke stator-2200pcs / year; pụrụ iche maka ndị ahịa, anyị nyere Bombardier (China & Europ), skoda (Czech), ụgbọ oloko China.
Etinyere ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ ala dị ala, ụgbọ oloko dị elu, ụgbọ oloko na ụgbọ oloko, ikike nke njedebe na-akarị otu puku iberibe kwa afọ; pụrụ iche maka ndị ahịa, anyị nyere Bombardier (China & Europ), skoda (Czech), ụgbọ oloko China.
Etinyere ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ ala dị ala, ụgbọ oloko dị elu, ụgbọ oloko na tram, ikike nke akụ karịrị otu puku iberibe kwa afọ; pụrụ iche maka ndị ahịa. Anyị butere Bombardier (China & Europ), skoda (Czech), ụgbọ oloko China.
Etinyere ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ ala dị ala, ụgbọ oloko dị elu, ụgbọ oloko na tram, ikike nke rotor moto-3000pcs / afọ, ikike nke akụkụ ndị ọzọ nke traction moto- ọtụtụ puku; pụrụ iche maka ndị ahịa, anyị nyere Bombardier (China & Europ), skoda (Czech), ụgbọ oloko China.
Etinyere ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ ala dị ala, ụzọ ọsọ ọsọ, ụgbọ oloko na tram, ikike -250pcs / afọ. Pụrụ iche maka ndị ahịa, anyị wetara maka China Railway Group Limited,;
Advanced mmepụta equipments: anọ na ọkara axis machining center, kwụ machining center, nkenke mgbali ule table na Complete Test ngwa (nko ule, airtight ule, ike ọgwụgwụ ule, wdg)
Etinyere ụgbọ okporo ígwè ọkụ, ụgbọ ala dị ala, ụgbọ oloko dị elu, ụgbọ oloko na tram, ikike -100pcs / afọ, pụrụ iche maka ndị ahịa, anyị nyere China Railway Group Limited, China sky Railway Group;
Equipment: nnukwu ịgbado ọkụ okpokoro okpokoro, High nkenke 5 - kwadoro gantry machining center. Anyị nwere ụlọ ọrụ a kwadebere nke ọma, ndị ọkachamara ọkachamara na ọtụtụ ndị ọrụ nwere nkà.
Ejiri ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ ala dị ala, ụgbọ oloko dị elu, ụgbọ oloko na tram, ụlọ ụgbọ mmiri na-eme ka mmiri nwee ume na-enye nnukwu mmetụta dị jụụ na sekit mmiri jụrụ oyi. Ike nke ụlọ mmiri na-eme ka mmiri dị mma bụ 1500pcs / afọ na ikike nke akụkụ ndị ọzọ nke traction moto karịrị otu puku iberibe kwa afọ. Maka ndị ahịa, anyị nyere Bombardier (China & Europ), skoda (Czech), ụgbọ oloko China.
Ọ dị mfe iji, enweghị nsogbu nhicha, enweghị nsogbu kọfị kọfị, nsogbu kọfị kwụsiri ike (Novice nwekwara ike ịme kọfị zuru oke), obere oge nchere, ọnụahịa kacha mma.
Isi okwu A, Isi okwu B, Ngwaahịa niile